गर्मी शैलीहरू: तपाईंको शर्टहरू बन्द कोठाबाट बाहिर निकाल्ने समय बेजिया
गर्मी शैलीहरू: तपाईको सर्टहरू कोठरीमा लिनका लागि समय
मारिया vazquez | 07/06/2021 10:00 | मैले के लगाउने?
सबै कुराले संकेत गर्दछ कि यस हप्ता हामी गर्मीको समयको आनन्द लिन सक्षम हुनेछौं, यद्यपि आधिकारिक रूपमा हामी यस मौसममा अर्को जून २१ सम्म प्रवेश गर्दैनौं। हटाउन समय, यसैले, शॉर्ट्स वा सर्टहरू, हामीले आज साझा गर्ने जस्तो शैलीहरू सिर्जना गर्न।
शॉर्ट्स एक हो गर्मीसँग सम्बन्धित कपडायद्यपि त्यहाँ त्यहाँ तिनीहरू पनि छन् जसले जाडोमा लगाउँछन्। एक शर्ट, ब्लाउज वा शर्ट र स्यान्डल वा शर्टको साथ मिलेर तातो दिनहरू रमाउन एक उत्तम कपडा। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ उनीहरू कसरी गर्छन्?
सामान्यको रूपमा, प्रत्येक सोमबार हामीले तपाईंको साथमा नौ पटक साझेदारी गर्न बिभिन्न फेशन इन्स्टाग्रामर्सको खाता प्रयोग गरेका छौं। नौ गर्मीका पोशाकहरू एकल साधारण डिनोमिनेटरको साथ: ती सबै सुविधाहरूमा शर्टहरू वा सर्टहरू।
यदि हामी यस प्रकारको प्यान्टमा सन्दर्भ गर्दछौं भने हामी विभिन्न चलनहरूको प्रशंसा गर्न सक्छौं। डेनिम शॉर्ट्स सबैभन्दा लोकप्रिय को एक को लागी जारी जब गर्मी आउँछ, तथापि, यस बर्ष उच्च waisted शॉर्ट्स मा बनेको सूती कपडा। सबै भन्दा राम्रो, कुनै श doubt्का बिना, सबैभन्दा उजाड दिनहरूको सामना गर्न।
यदि हामी तिनीहरूलाई संयोजन गर्न बिभिन्न विकल्पहरूमा सन्दर्भ गर्दछौं भने हामीले दुईवटा प्रचलनहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नै पर्छ। न्यूनतम प्रेरणाको पहिलो, हामीलाई उनीहरूसँग जोड्न आमन्त्रित गर्दछ बेसिक टी-शर्ट वा सेतो शर्ट वा कालो र फ्ल्याट स्यान्डल वा टी-शर्टको साथ अधिक सुविधाका लागि पूरा गर्नुहोस्।
दोस्रो प्रवृत्तिले हामीलाई शॉर्ट्सको संयोजन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ बोहो प्रेरित शर्ट वा ब्लाउज। तिनीहरू शर्टहरू एक फूल प्रिन्टको साथ र / वा फेसनल विवरणहरू जस्तै फीता, रफल्स वा फफ स्लीभको साथ हुन सक्दछन्। आफ्नो हेराई पूरा गर्न तपाईलाई केवल तल्लो वा मध्यम हिलको स्यान्डल आवश्यक पर्दछ, ती चीजहरू तपाईसँग धेरै सहज र रफिया सामानहरू।
के तपाई गर्मीमा सामान्यतया सर्ट लगाउनुहुन्छ? वा के तपाईं छोटो जान चाहानुहुन्छ स्कर्ट वा लुगा लगाउन रुचाउनुहुन्छ?
छविहरू - @ व्हीलस, @bartabacmode, @adelinerbr, @tsangtastic, @ fleuron.paris, @collagevintage, @lionseb, @auroraartacho
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » मैले के लगाउने? » गर्मी शैलीहरू: तपाईको सर्टहरू कोठरीमा लिनका लागि समय
कसरी खान चिन्ता नियन्त्रण गर्न
कसरी लिप बाम बनाउने